Ukudla okuhambisana nokufundisa
Abazali abasha nabangenalwazi bahlale benemibuzo eminingi lapho benakekela ingane. Lokhu kusebenza kumsoco wakhe. Uma isikhathi sokudla okuhambisanayo kufanelekile, udokotela wezingane angakunikeza amacebo ahlukene okuletha imikhiqizo emisha. Phakathi kwabo, unina angakhetha okulungile yena nomntanakhe. Enye yezindlela ezithandwa kakhulu yilapho okuthiwa i-pedagogical yokudla okuhambisanayo, noma i-pedodrome. Ake sihlole izici zalo ngokuningiliziwe.
Iyini isondlo sokuqeqesha esiphambanisayo?
Ikhono lokufundisa libizwa ngokuthi uhlobo lokudla okuhambisanayo, lapho ingane isetshenziselwa ukuncelisa ngokudla nokuziphatha etafuleni. Inhloso yokudla okuhambisana nokuqeqesha akusikho ukondla imvuthuluka, kodwa ukuthuthukisa intshisekelo yemvelo ekudleni.
Ungaqala ukudla kusuka etafuleni elivamile lapho umntwana esilungele ukuzama imikhiqizo emisha, okungukuthi:
ingane yayinezinyanga eziyisithupha ubudala;
ingane inesithakazelo sokudla;
izinyo ziphuma ku-crumb.
Uma lolu hlelo lufanelana nomama wakho, kufanele uhambisane nemithetho elandelayo yokudla okuhambisanayo:
U-Kroha wazijwayele ukudla kuphela etafuleni elivamile ekhanda likayise, futhi kamuva naye ekhanda lakhe eliphakeme.
Angidingi ukupheka ngokwehlukana ngane. Esikhathini ungadla u-usawoti kanye nezinongo. Ukudla komntwana akusikihliwe kuze kufike ukuvumelana kwe-puree, futhi unikeze ngepuleti yomama ngesimo seqanda.
Umntwana uvunyelwe ukuzama imikhiqizo nge-microdoses - lokhu kungokudla okuningi okubekwe phezu kwephuzu lesipuni, ngokusayizi we-okusanhlamvu welayisi noma okunye okuncane. Phuza ukuze uhlolwe kufakwe phansi kwegag emvongeni we-sip eyodwa. Ngokuhamba kwesikhathi, inani lokudla ngesikhathi esisodwa landa. Phakathi nesonto ingane ingajwayela imikhiqizo emisha emithathu.
Ukudla kufanele kunikezwe kuphela kusuka epulatifini noma esandleni, kodwa hhayi kusuka etafuleni. Ngakho-ke, isiko lokudla silinywa.
Ukudla okuhambisana nokufundisa akufanele kungene esikhundleni sokondla ubisi lomama. Unganika ukudla kusuka etafuleni "elidala" ngaphambi, ngesikhathi nangemva kokuncelisa.
Umama kufanele akhuthaze isithakazelo semvuthu ekudleni. Akudingekile ukuba "kunqunywe" ingane ibe yinqwaba. Kungcono ukunikeza ama-microdoses wemikhiqizo ehlukene. Uma ingane yenqaba, ifanelana, akudingeki ukuphoqa.
I-Pedicure: ngokumelene nokuphikisana
Le ndlela yokwethulwa kwemikhiqizo emisha inezinhlangothi ezinhle nezingalungile.
Izinzuzo zokudla okuhambisana nokufundisa zihlanganisa lokhu okulandelayo:
ingane iyazijwayeza amasiko okudla omndeni wayo, ifunda ukuphatha ukusika;
i-crumb ijwayele imikhiqizo emisha lapho ilungele futhi ifuna ukunambitha;
ingane ifunda ukuhlafuna, ukugwinya, futhi indlela yakhe yokugaya kancane kancane isetshenziselwa ukugaya ukudla okuyinkimbinkimbi kunobisi lwebele;
Ukujwayela ukudla "okudala" kuyashesha;
esikhathini esizayo, umama akakwazi ukujwayela inkinga enjengokungabi nampofu umntwana;
umama akadingi ukupheka eceleni komntwana futhi asebenzise isikhathi namandla phezu kwalo;
akudingeki ukuthi uthenge amazambane aqoshiwe okheniwe, okusanhlamvu okusheshayo;
ingane ingashiywa nogogo, ubaba usuku lonke (ngemva kwezinyanga ezingu-9).
Ngokuvamile, ukudla okuhambisana nokufundisa kuyindlela yokuqeqeshwa kwemvelo yengane yokudla komuntu omdala.
Kodwa-ke, abazali kufanele baqaphele ukwehluleka okwamanje okukhona kokudla okuhambisanayo:
kunzima ukukhomba umkhiqizo oholele ekuhudeni noma emzimbeni;
Ekuqaleni ingane ingaxotshwa ngezicucu zokudla, okuvame ukudala ukukhathazeka nokwesaba kumama;
wonke umndeni uzodingeka ushintshe ukudla - udinga ukukhipha okuthosiwe, okubabayo, usawoti, ukubhema.
Ukukhetha umfelandawonye wokufundisa, umama kufanele aqaphele uma ingane yakhe ihlaselwa. Uma umama egula nge-ARVI, unezinyo eziyingozi noma izifo ezingelapheki, ukuze angaphili ingane, ungondli kusuka epulatifheni yakhe.
Ungabeka nini abafana?
Iyini lokushisa kwezingane ezinyangeni?
Indlela yokufundisa ingane ukuba iqhubekele phambili?
Ingane ezinyangeni ezingu-6 - ukuthuthukiswa nokudla okunomsoco
Amapayipi amazinyo ezinsana
Ukuxhumana nokuphakama nesisindo somntwana
Ukuthuthwa kwezingane kwabantwana
Yini okufanele ugqoke ama-trous ebusika?
Izimpawu phansi komntwana
Izibuko zesifazane ezifashisayo zonyaka 2014
Indlela yokuziphatha esimweni sokuphikisana?
INkosi ifile, isikhathi eside iphile iNkosi! Yini esiyaziyo ngendlalifa kaHugh Hefner - Cooper Hefner?
UCameron Diaz wasula amagama wabathandi bokuqala enkumbulweni
Ungabamba kanjani ukushisa ingane ngokushesha futhi ngokuphepha?
Ukushaja abesifazane abakhulelwe - 3 trimester
ISonto LamaSanta Cyril noMethodius
Ukugqoka kanjani ukuhlolwa?
Ukuvuselelwa ngemva kokushaywa yisifo
I-apnea ezisanda kuzalwa
Isikhwama seNew Yorker 2013
Indlela yokulungiselela ama-strawberries ebusika?
U-Adriana Lima noMarco Jarych asisekho indoda nomfazi
Ukuhluleka kwenhliziyo - izimpawu, ukwelashwa